Tsy mazava ny lisitra navoaka tao amin’ny tranonkalan’ny Minisitera - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fampidirana mpiasa vaovao
Tsy mazava ny lisitra navoaka tao amin’ny tranonkalan’ny Minisitera
Raharinirina Lalaina il y a 1 moi
Nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety ny Sempama ny talata 18 mey teny Mahamasina. Nanambaran’izy ireo fa tsy mazava sy peta-toko ny ny lisitra navoakan’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Minisitera
« Araka ny nambaranay tamin’ny conférence de presse farany dia manahy izahay sao dia ny Minisiteran’ny Fampianarana Teknika sy Fanofanana Arak’Asa no tsy hahatanterahan’ny Filoham-pirenena ny velirano sy ny vina nataony tamin’ny vahoaka » hoy ny mpikambana ao amin’ny Sempama ny talata 18 mey. Tamin’ny sabotsy 15 mey lasa teo dia nanambara ny Sekretera Jeneraly fa tsy ho ela ny lisitr’ireo mpiasa voaray ho mpiasam-panjakana raikitra. Nivoaka tokoa zany. Tsy mazava anefa ny lisitra izay navoaka tao amin’ny tranonkalan’ny Minisitera.
Tsy misy famaritana mazava (na fiche technique) ny mombamomba ireo olona voalaza ao anaty lisitra ireo (avy amin’ny ivon-toeram-piofanana aiza ? Firy taona niasana ? Inona ny andraikitra noraisiny ? sns ?)
Tsy mazava amin’ny mpiasa ireo fepetra sy fomba nandraisana ho mpiasam-panjakana hita ao anaty lisitra navoaka. Koa noho izany dia mitaky ny Sempama ny hamoahana ny “Termes de références de recrutement” izay misy ny mason-tsivana satria araky ny fanazavan’Atoa Sekretera Jeneraly dia ireo izay mahafeno fepetra ihany no ho raisina ho mpiasam-panjakana. Ny fanontaniana dia inona marina ary ireo fepetra napetraka ?
Takian’ireo mpikambana ao amin’ny Sempama ny hamoahana ny fiche technique-n’ireo olona recruté mba hahafantarana ny momba azy ireo tsirairay avy : iza ilay olona ao anaty lisitra ? Aiza izy no miasa ? Raha vacataire izy dia inona no taranja tazominy ? Raha ECD izy dia inona no andraikitra tazominy, ny diploma ananany ? Ary firy taona niasana izy ? ny taonany ?
Araka ny nambaran’ireo mpikambana ao amin’ity sendikan’ny mpampianatra sy mpanabe ity dia mahatsapa izy ireo « fa peta-toko sy kitoatoa ny lisitra izay nivoaka satria araky ny fantatra dia misy ao anatin’ny lisitra: olona efa maty izay ananana porofo, ary misy ihany koa ireo efa recruté (efa manana IM) kanefa dia mbola tafiditra ao anatin’io lisitra io indray ».
Raha ny fahafantarana azy dia arakaraky ny isan’ny ECD sy ny vacataire am-perin’asa no ahazoana ny poste budgétaire izay atao mandritra ny conférence budgétaire iarahana amin’ny Ministeran’ny Teti-Bola sy Fitantanam-bola. Noho izany, mitaky ny Sempama mba ho ireo ECD sy Vacataire izay am-perin’asa no ho raisina amin’izany poste budgétaire izany. Ho an’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena dia mitaky izahay ny hamoahana ny lisitr’ireo voaray tao anatin’ny am-pahibemaso sy ny quota eny anivon’ny CISCO.
Mamaha olana maro sy mampilamina ny fangaraharahana. Inoana fa tsy ho sarotra ny hanaovana izany mba ho tanteraka tokoa ilay fitenin’ny Ntaolo hoe : ny hisavorovoroan-kilantoana, ka tsy hahazo laka ny tsy fifampitokisana.
Fampianarana sy fanabeazana : Mijery lavitra sy fampianarana toa ampitain-davitra - il y a 22 jours
Fampidirana mpiasa vaovao : Tsy mazava ny lisitra navoaka tao amin’ny tranonkalan’ny Minisitera - il y a 1 moi